Ihe a ga-eme na mobiles ochie: ụzọ kachasị mma iji rite uru na ha | Gam akporosis
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ahịa na-ejupụta na ekwentị mkpanaaka, eziokwu bụ na anyị na-agbanwe obere na obere mobile. Agbanyeghị, site n'ime nke a, anyị nwere ike ị nwe iji ekwentị ochie rụọ ọrụ ụfọdụ karịa ịchụpụ ya na ịnwe ya dị ka akwụkwọ mpempe akwụkwọ. Na n'ezie, ọ bụ nkịtị na ị maghị ihe-eme ochie mobiles gburugburu ụlọ gị.
Offọdụ nhọrọ ị nwere bụ, dịka ọmụmaatụ, iji gbanwee ya na igwefoto onyunyo, ihe ọkpụkpọ multimedia ma ọ bụ onye nchọgharị GPS n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Yabụ ọ bụrụ n’echiche maka ire, inyefe, inye ma ọ bụ ọbụla ighazigharị ya, buru ụzọ leba anya na nhọrọ ndị anyị na-enye gị iji nwee ike ime ya.
1 Ihe ị ga-eme na mobiles ochie: ndụmọdụ na usoro kachasị mma
1.1 Kọmputa komputa na kiiboodu
1.2 Ndị na-agagharị GPS
1.3 Video onyunyo igwefoto
1.4 Ochie console
1.5 Weara maka egwuregwu
1.6 Igwe ntanetị nke TV
1.7 Ogwe foto
1.8 Elekere oti mkpu Smart
1.9 Da akụrụngwa
1.10 Onye ọkpụkpọ mgbasa ozi
1.11 Baby ileba anya
Ihe ị ga-eme na mobiles ochie: ndụmọdụ na usoro kachasị mma
Kọmputa komputa na kiiboodu
O bu eziokwu na o nwere ike iju gi anya jiri mkpanaka dị ka òké na kiiboodu, mana enwere ike iji ya n'oge ụfọdụ oke dị ka igodo nkwụsị ma ọ bụ ihe mmetụ ahụ kwụsịrị ịrụ ọrụ.
Iji mee nke a, ị ga-etinye ngwa dịka Unified Remote (iOS na gam akporo) site na iji WiFi ma ọ bụ njikọ Bluetooth. Remote Mouse (iOS na gam akporo) ma ọ bụ Mouse Kit (gam akporo) bụ nhọrọ ndị ọzọ dị oke mma.
Developer: Ihe dị n’ime
Ndị na-agagharị GPS
Enwere obere taa na ekwentị mkpanaaka anaghị eme, na iji ha dị ka GPS bụ ihe a na-ahụkarị na-atụle na enwere ngwa dịka Google Maps ma obu Waze. Agbanyeghị na itinyeworị ha na ekwentị mkpanaaka gị, ịnwere ike iji ekwentị nke abụọ a naanị dị ka GPS.
Nke a pụtara na Onweghị ihe ga-egbochi njikọ nchọgharị gị, Na mgbakwunye na idebe batrị ekwentị gị kachasị. Agbanyeghị n’iburu n’uche iji ekwentị dịka GPS ị ga-achọ njikọ Internetntanetị, ọ bụ ezie na ụfọdụ ngwa dịka Google Maps na-enye gị ohere ibudata map ndị ahụ wee jiri ya na-enweghị njikọ.
Video onyunyo igwefoto
Na ị maara nke ahụ, ọ bụrụ na ị maghị ihe ị ga-eme ochie mobiles, site na ngwa ụfọdụ ị nwere ike gbanwee ekwentị gị ka ọ bụrụ igwefoto onyunyo Ma ime ya dị mfe na iOS na gam akporo.
Ndị a ngwa gị mobile ga-eme dị ka a onyunyo igwefoto, àjà otu ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka Ndekọ ihe niile na-eme ma ọ bụ na-egosi gị ihe oyiyi na ozugbo na-na ebe ị na-etinye na ngwaọrụ.
Obu ihe kwesiri ka mobiles nke oge a nwere ndi nchikota di nma na RAM di elu na ufodu uzo ka igha na-agba ọsọ ochie. Ọ bụ ezie na ị nwekwara nhọrọ nke jiri ngwaọrụ gị dị ka njikwa vidiyo egwuregwu aka iji ụfọdụ emulators maka ya na mgbakwunye na iji vidiyo egwuregwu ụwa.
Weara maka egwuregwu
Ọ bụ ezie na ahịa ahụ enyelarị ngwaọrụ dị iche iche nke na-enyocha ahụ gị, ị ga-enwe ike iji mkpanaka gị maka ya. Gbanye storelọ ahịa ngwa ị nwere ike ịchọta ngwa dị iche iche na-achịkwa mmega ahụ ị na-eme, calorie nke ị sureworo ma ọ bụ gụọ oge ị tinyere na mmega ahụ. Yabụ, ịnwere ike iji ekwentị ochie gị were ya were ụbọchị egwuregwu niile.
Igwe ntanetị nke TV
Mgbe ụfọdụ, ọ na-eme na anyị tufuo igwefoto a na-amaghị ebe anyị hapụrụ ya, ma ọ bụ na ọ na-akwụsị ọrụ. N'okwu a ị gaghị azụta nke ọhụrụ, ebe ekwentị ochie gị nwere ike ịrụ dị ka njikwa Site na ngwa Google Play dị iche iche dịka Universal TV Remote nke na-egosi nkesa nke nkịtị nkịtị na ihuenyo nke ngwaọrụ ahụ.
Ọ bụrụ na ọ nweghị ihe mmetụta infrared, ịnwere ike ijikọ ụfọdụ ngwaọrụ site na WiFi, maka nke a, ị ga-enwe ma ama ma telivishọn jikọọ na otu netwọk WiFi. Ozugbo inwere ihe niile, ịnwere ike iji ngwa ndị dị ka SURE Universal ma ọ bụ ọtụtụ ndị ọzọ ndị nrụpụta nyere n’onwe ha. Ọ bụrụ na ị nwere gam akporo TV, ị nwere ike iji ngwa gam akporo TV Remote Control ngwa ngwa, ma ọ bụrụ na ị nwere iOS ị nwere ike iji ngwa dị ka myTifi, jikọọ Apple TV ma jiri Apple TV Remote.
Ofzọ ọzọ kachasị mma iji wee merie ekwentị ochie bụ jiri ochie ama dị ka okpokolo agba dijitalụ ebe mụta nwa dị iche iche ihe oyiyi. Ọtụtụ ngwa na-enye gị ohere ịme ọrụ a, dị ka Digital Photo Frame na android ma ọ bụ LiveFrame na iOS.
Digital Photo ụba ngosi mmịfe
Elekere oti mkpu Smart
Mgbe ha webatara ọrụ nke mkpu n'ime mobiles, a na-echefu elekere mkpuchi. Ọ bụ ya mere ị ga-eji kwụsị iji ekwentị gị kacha elu iji mezuo ọrụ ahụ ma jiri mkpanaka gị nke abụọ dị ka elekere mkpuchi ka mkpu wee na-ada kwa ụtụtụ. Enwere ụfọdụ ngwa dị mma maka nke a, dị ka Timely na gam akporo ma ọ bụ Ihi ụra: oge ​​elekere dị egwu na iOS
Bịara n'Ezi Oge: Tracking App & Billable Awa Tracker
Developer: Nchekwa AS
Ọ bụrụ na ị na-akpọkarị ụbọ akwara mgbe ụfọdụ, ọrụ a nwere ike ịmasị gị, ebe ụfọdụ ngwa ị nwere ike ịchọta na Google Play na-enye gị ohere ịmị ụda gị, dịka ụbọ. Ọ bụ ezigbo ọrụ iji ekwentị ochie gị na ịkwesighi ịga n'ihu na-eji ekwentị mkpanaaka gị na-akụ ngwá ọrụ gị oge ọ bụla ị ga-eji ha. Offọdụ n'ime ngwa kachasị mma bụ ihe atụ Guitar tuner nke bara uru ọ bụghị naanị maka ngwa ahụ, kamakwa maka ndị ọzọ dịka bass ma ọ bụ ukulele, na ị nwere ike na-akụ ha mfe na na ọkachamara nkenke.
Onye ọkpụkpọ mgbasa ozi
N'ezie ma iji igwe ma obu ekwenti gi ochie ma obu egwu ma ọ bụ ile ihe nkiri ma ọ bụ usoro. Ma, ị tụlee ịme oghere n'ime ụlọ gị ebe ị ga-etinye ngwaọrụ gị ma jiri ya naanị maka nzube a?
Ma ọ bụ na smartphone bụ ngwaọrụ dị mma maka ọrụ a, ebe ọ bụ na mgbakwunye na nbudata ngwa ma ọ bụ egwuregwu na ya dị ka Spotify ma ọ bụ ihe ọ bụla na-agba ọsọ n'elu ikpo okwu, ị nwekwara ike ikpokọta ya na Chromecast iji nwee ike izipu ọdịnaya niile nke ekwentị ahụ Ihuenyo nke TV gị ma si otú a nwee ike ịhụ ọdịnaya dị na nnukwu ibu.
Baby ileba anya
Na Google Play na Storelọ Ahịa Ngwa ị ga-ahụ ngwa ndị na-eme ka ekwentị gị dị ka nwa nyocha. Ya mere, ị nwere ike inye ndụ nke abụọ na ekwentị gị ochie, ka ị na-edekọ obere gị yana iziga ọkwa na ịdọ aka ná ntị mgbe ọ na-ebe ákwá ma ọ bụ na-achọpụta mmegharị.
Ngwa a na - enye gị ohere ka gị na nwa gị nwee mkparịta ụka ma ọ bụ kpọọ egwu ma mee ka ọ gee ya ntị iji mee ka ọ dị jụụ, na mgbakwunye na ịchekwa akụkọ ihe mere eme na ndekọ ọrụ ma ọ bụ ịdọ aka na ntị mgbe arrivesntanetị na-abịa na njikọ dị ala ma ọ bụ mgbe batrị na-agba ọsọ dị ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Amaghị ihe ị ga-eme na igwe ochie gị? Tozọ iji nye ha ndụ nke abụọ
Ngwa 5 kachasị mma maka gam akporo